Dhaqaalaha - BBC Somali - Mawduuc
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 21 Mey, 2014, 18:48 GMT 21:48 SGA
Bankigii u dambeeyay US oo xiraya akoonka xawilaadaha
Laba hay'adood oo caalami ah Oxfam iyo Adeso, (African Development Solutions), ayaa ka digay in nolosha kumanaan Soomaali ah ay khatar ku jirto.
Shir caalami ah oo ka furmaya Nigeria
Madaxweynaha Nigeria ayaa amar ku bixiyay in la xiro iskuulada iyo xafiisyada dowladda, iyadoo shir caalami ah uu ka furmayo dalkaasi.
3 Mey 2014
IMF oo lacag dayn ah siinayso Ukraine
Hay'adda lacagta adduunka ee IMF, ayaa ansixisay lacag dayn ah oo gaaraysa 17 bilyan oo dollar oo ay siineyso waddanka Ukraine.
1 Mey 2014
Obama oo maanta booqanaya Malaysia Mr Obama waxa uu noqonaayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykan ah oo booqdo dalka Malaysia muddo 48 sano ah kadib.
26 Abriil 2014
Adeeg qaboojiye oo lagu soo kordhiyay dekedda Berbera
Berbera inkastoo ay ku taallo bad uu kalluun ka buuxo, haddana ka faa'iideysiga kheyraadka baddu waa uu hooseeyaa.
Dhinaca dhaqaalaha maxaa laga dhaxlay MandelaDaawo02:19
Madaxwaynihii hore ee Koonfur Africa, Nelson Mandela, ayaa qabsaday dalka iyadoo uu ku kala qaybsan yahay dhinaca isirka iyo kan dhaqaalaha
Wasiirka Kheyraadka Soomaaliya oo u warramay BBCMaqal05:22
Kadib markii la soo gabagabeeyay shirka caalami ah oo looga hadlayay sahminta shidaalka iyo gaaska Soomaliya, ayaa weriyaha BBC Farxaan Maxamed Jimcaale waxa uu warreystay wasiirka Kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya Cabdirisaaq Cumar Maxamed.
7 Oktoobar 2013
Shirka sahminta shidaalka SoomaaliyaMaqal04:54
Shir caalami ah oo looga hadlayay Sahminta shidaalka iyo gaaska Soomaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay galabta London, waxaa soo qabanqaabisay shirkad British ah Soma Oil and Gas, oo dhawaan heshiis la gashay dowladda Soomaaliya.
Brazil oo daymaha ka cafinaysa afrika
Madaxweynaha Brazil Dilma Rousseff ayaa sheegtay in Brazil ay ka cafinayso Afrika amaahda ay ku leedahay ama waqtiaga u dheeraynayso.
26 Mey 2013
Soomaaliya oo ka qeybgashay shirka IMFMaqal05:21
Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka qeybgaleen shirka sanad walba ee dalalka xubnaha ka ah hey'addaha lacagta adduunka ee IMF. 22 Abriil 2013
Shalanbod iyo Buula Mareer oo la weeraray
30 Agoosto 2014
Thabane oo Lesotho isaga baxay.
Feejignaanta Britain oo sare loo qaaday